Mpempe: 5 Ụzọ Iji Supercharge gị SEO Analysis Na Web Web scraping
Intanet jupụtara ndụmọdụ na SEO. Na web scrap , ọ ga-ekwe omume iweghachite ebe nrụọrụ weebụ anyị na-asọmpi iji chepụta usoro iji wepụ ha. Ma ị ga-ehichapụ aha njirimara, nkọwa meta ma ọ bụ isiokwu, ị ga-eji nri ihe nchịkọta ọdịnaya iji nweta ọrụ gị - hr and payroll software providers.
Nke a bụ ụzọ 5 dịgasị iche iche iji nyefee nyocha SEO gị na ntanetị weebụ.
1. Ngwuputa nke onu ogugu:
Ị nwere ike nyochaa ebe ị na-asọmpi ma nweta ọdịnaya ya maka isiokwu nyocha. Maka nke a, ị nwere ike iji SEMRush ma chọọ isiokwu kwesịrị ekwesị. SEMRush bụ ihe mkpocha nchịkọta data . Na ya, ị nwere ike ịchọpụta nke isiokwu gị ndị asọmpi na-eji. Ọzọkwa, ị nwere ike ịchọpụta okwu mkpịsị aka ya na mkpụmkpụ-ya ma mee ka saịtị gị dị mma.
2. Ihe arụ nke ibe:
Ngwaọrụ ọrụ SEO dị iche iche na-elekwasị anya na ngalaba na isiokwu maka ọkwa dị elu. Ọ dị mkpa nyocha data iji melite arụmọrụ zuru ezu nke ibe weebụ gị. Ị chọrọ ịkwọ ụgbọala ndị ọzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog gị? Google Adwords API bụ ngwá ọrụ magburu onwe ya nke na-ewepụ data ma na-agbawa ibe weebụ gị n'ụzọ dị mfe. Ọzọkwa, ọ na-enyere aka melite arụmọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị ma kwalite ọkwá ya.
3. Meta-Data Extraction:
Kimono Labs na Bubata. Eji abuo abuo di iche iche ihe ndi ozo . Ha na-enyere aka wepụ data-meta ma depụta ibe weebụ anyị n'ụzọ dị mfe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ihe mere saịtị onye na-asọmpi ji dị elu karịa nke gị, ịnwere ike ịnwale ụdị ọrụ ndị a ma chọpụta okwu kwesịrị ekwesị maka saịtị gị. Na mbubata. io na Kimono, ịnwere ike iwepụta nkọwa meta, meta aha, na mkpado meta ma nwee ike melite arụmọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị.
4. Ebe nrụọrụ weebụ na-ekpuchi maka peeji nke ọkwa:
Ihe mgbaru ọsọ nke SEO bụ iji bulite peeji nke maka isiokwu dị iche iche. Niile webmasters chọrọ SEO nchịkọta weebụ nke nwere ike inyere ha aka melite arụmọrụ zuru oke nke saịtị ha. Ozugbo a kpochapụrụ data ahụ kpamkpam, ị nwere ike bipụtara ya na blog gị ma kpoo ya okporo ụzọ. Ị nwere ike ịnwale Scrapy, ihe ntinye data nke na-ewepu ozi site na weebụsaịtị dị iche iche na-agbanweghị isi okwu gị. Otu ụzọ isi mee ka ọnọdụ dị elu bụ ịchọta ihe ndị na-asọmpi gị na-eme ma na-eṅomi ebe nrụọrụ weebụ ha.
5. Njikọ dị n'ime na mpụga:
Ọ dị mma ịsị na ntanetị weebụ na SEO nwere mmekọrịta siri ike. Ị na-achọ ntanetị na ntanetị maka njikwa ogo search engine. Na Getleft, ParseHub na OutWit Hub, ị nwere ike ọ bụghị naanị ịwị ma wepu ibe weebụ gị kamakwa ịmepụta njikọ ndị dị ike dị n'ime.
Site na ngwa ngwa ntanetị weebụ, ị nwere ike ịchọpụta ọnụọgụ ole isiokwu nke onye na-eme egwuregwu gị jiri. E kwesịrị inwe ọnụ ọgụgụ dị mma nke isiokwu dị n'ime ọdịnaya gị, ọ ga-enyekwara aka zere ịṅụ nri. Ọzọkwa, ị nwere ike wepụ data bara uru site na vidiyo na ihe oyiyi. Na ụdị nri ngwaọrụ , ị nwere ike iwepụ ihe ọmụma site na foto na obere vidiyo ma nwee ike ịkwalite ọkwa gị n'ogologo. Na mkpirikpi, web scraping na SEO nwere ike inyere aka ịghọta otú onye na-asọmpi na-arịgo elu nke nsonaazụ ọchụchọ.